Mpanamboatra foara PS
Agent mpamokatra volo PP
Mpikirakira fampiroboroboana XPE
PC & PA & ABS injection ...
Agent tsy misy fofona tsy misy fofona
mpiorina mikraoba mikraosera dia karazan'orinasa manaova foaming manokana novokarin'i JOYSUN. Sombin-javatra boribory kelikely (mavo mavo na fotsy ny fisehoan'ny mikraoba), mihamalemy ny akorany thermoplastic aorian'ny fanafanana, ny habetsaky ny mpamokatra foam dia afaka mitombo haingana mitombo hanana amina am-polony maro, ny vongan-kazo bitika dia tsy vaky, mijanona ho baolina famehezana feno , mba hahatratrarana ny vokatry ny sombina. Mbola mitazona ny vokam-pitotoana aorian'ny fisotroana ary tsy mihena. Ny vokatra mamoaka dia mandeha ...
Omeo habe samihafa amin'ny PTSS, TSH, vovoka bicarbonate novaina ary atiny masterbatch 40% -70%. Agénim-pahefana fotsy dia mpamatsy foza endothermika. Tsy misy fofona, milamina ny asany ary misy fanaparitahana tsara. Vokatra misy loko tsara, lavaka miboiboika mitovy. White foaming agents dia mety amin'ny fingotra sy plastika extrusion ary ny tsindrona bobongolo bobongolo, ny piraofilina PVC ary ny fantsom-panafody, ny fantsom-bokatra, ny famokarana vokatra fotsy, azo ampiasaina ho toy ny mpandraharaha mpiorina amin'ny foulam-batana ...
ADC foaming agents dia be mpampiasa amin'ny karazana vokatra vita amin'ny fingotra sy plastika. Afaka manome Adc madio amin'ny haben'ny sombin-javatra 4μm, 5μm, 6μm, 8μm, 10μm ary 12μm izahay, ary koa ireo vokatra novaina ampiasaina. Izy io dia manana ny toetran'ny fizarana haben'ny ampahany mifantoka, fanaparitahana tena tsara. Fampiharana 1.PVC foam board / tabilao fanaovana dokam-barotra / birao fanaka / vehivavy maty vady 2.PVC WPC foam board 3.PS sary sary 4.XPE 5.Prod vokatra tsindrona 6.PVC kiraro
Ny lubricant an'ny JOYSUN dia misy vokany tsara amin'ny fanosorana, fananana mekanika tsara. Amin'ny maha-menaka plastika hazo azy, ity vokatra ity dia afaka manatsara ny fanatanterahana ny resina matrix, ary manatsara ny famaranana ny vokatra. PE WPC Decking
Ny mpamokatra foza OBSH dia ampiasaina hamokarana vokatra tsy misy fofona, tsy misy loto, tsy mamotipotika miaraka amina firafitra mirindra tsara. Mety amin'ny fingotra voajanahary sy fingotra sentetika isan-karazany (toy ny: EPDM, SBR, CR, FKM, IIR, NBR) ary ny vokatra thermoplastic (toy ny PVC, PE, PS, ABS), azo ampiasaina amin'ny fifangaroan'ny résin-rubber koa.
Mpanamboatra vovoka PVC
1.PVC foam doka fanaovana dokam-barotra, birao fanaka & birao fananganana 2.PVC varavarankely misokatra & mombamomba ny vavahady PVC WPC foam
Fampidirana ny vokatra Ny foaming agents dia ampiasaina amin'ny PS extrusion foaming Application
Fampidirana ny vokatra Ny mpamokatra foama dia ampiasaina amin'ny PP Injection & extrusion foaming Function ① Hamafana ny fihenan'ny marika rehefa tsindrona ny vokatra, ary tsy ho voakasik'izany ny fisehoan'ny vokatra ② Mampihena ny famolahana na ny fiovana vokatry ny fihenjanana anaty sy ny fihenan'ny ③ mampihena ny famolahana tsindrona fotoana, hanafohezana ny fotoana tsingerina, hanatsara ny fahombiazan'ny famokarana ④ afaka mampihena ny lanjan'ny 10-30% (miankina amin'ny hatevin'ny vokatra), manampy amin'ny fampihenana ny vidin'ny ma ...
Fampidirana ny vokatra XPE dia akora vita amin'ny vatan'ny polyethylene mifandray amin'ny simika, raha ampitahaina amin'ny EPE (polyethylene foamed ara-batana, fantatra amin'ny anarana hoe landy perla), avo kokoa ny tanjaka am-pahefana ary tsara kokoa ny sela. Raha ampitahaina amin'ny fitaovana PE na tsy PE hafa, ny fitaovana PE dia manana fahombiazana tsara amin'ny faharetana, fanoherana hazavana, fanoherana ny fiatraikany ara-batana ary lafiny hafa. XPE izy tenany dia manana fananana simika miorina, tsy mora lo, tsy misy fofona ary elastika tsara. Fampiharana It ...
Mpirotsaka fampidirana PC & PA & ABS
Fampidirana ny vokatra Ny foza dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo PC & PA & ABC ① Hofoanana ny fihenan'ny marika, ary tsy hisy fiantraikany amin'ny endrik'ilay vokatra ② Mampihena ny fihenan-tsofina na ny fiovana vokatry ny fihenjanana anaty sy ny fihenan'ny ③ mampihena ny fotoana famolahana tsindrona, hanafohezana ny fotoana tsingerina manatsara ny fahombiazan'ny famokarana ④ afaka mampihena ny lanjan'ny 10-30% (miankina amin'ny hatevin'ny vokatra), mampihena ny vidin'ny akora fampiharana PC & PA & ABS p ...
Fampidirana ny vokatra Tsy misy formamide Foaming Agent Ny toetra mampiavaka ny foaming agents dia tsy misy poizina, tsy misy fofona, poti-vovoka kely, fanaparitahana tsara amin'ny polymer miaraka amin'ny bubble fanamiana. Fonosana sy fitehirizana Kitapo plastika na kitapo taratasy kraft amin'ny fonosana 25kgs. Ny fitoniana dia tsara toy ny fitehirizana ny mari-pana amin'ny efitrano. Mitahiry amin'ny toerana mangatsiaka sy maina manalavitra ireo loharanon'ny afo, afo ary hafanana. Fampiharana vokatra Azo ampiasaina amin'ny angovo vaovao, miaramila, fitsaboana, fiaramanidina, fanamboarana sambo, elektronika, fiara ...
1. Ca-Zn stabilizer Calcium-zinc stabilizer dia novolavolain'ny teknolojia fitambarana manokana, ho singa lehibe. Izy io dia afaka manolo ny stabilizers misy poizina toy ny firaka, ny sira cadmium ary ny organotin, ny fampiharana dia nanaporofo fa amin'ny vokatra vita amin'ny resin PVC dia tsara ny fahombiazan'ny fanodinana, ny fitoniana amin'ny hafanana dia mitovy amin'ny stabilisitra sira, satria ny stabilista mafana pvc mafana indrindra momba ny tontolo iainana dia manana fampisehoana dingana tena tsara. Milamina tsara sy fahaizan'ny toetr'andro. Ny tara-masoandro manohitra mafy, ...